Khaladaadka Waxaa Lagu Ogaaday Faylka
Bogga ugu weyn Products DataNumen Outlook Repair Khaladaad ayaa lagu ogaaday feylka xxxx.pst…
Macluumaad Faahfaahsan oo ku saabsan "Khaladaadka ayaa lagu ogaaday Faylka" Khalad
Markaad fureyso faylka PST ee waxyeeleeyay ama musuqmaasuqay Microsoft Outlook, waxaad arkaysaa farriinta qaladka ah ee soo socda:
halka 'xxxx.pst' uu yahay magaca faylka Muuqaalka PST ee la furayo.
Marka Microsoft Outlook ay isku dayeyso inay furto feyl, waxay marka hore aqrin doontaa qeybta cinwaanka oo ay hubineysaa macluumaadkeeda, tusaale ahaan, saxiixa feylka iyo sidoo kale macluumaadka iswaafajinta. Haddii xaqiijintu guuldaraysato, way soo sheegi doontaa "Faylka xxxx.pst ma aha feylal fayl shaqsiyeed." qalad Haddii kale, way sii wadi doontaa akhrinta qaybta xogta harsan iyo haddii ay jiraan wax khaladaad ah oo ka jira qaybtaas, waxay soo sheegi doontaa qaladka kor ku xusan, waxayna kugula talineysaa inaad isticmaasho Qalabka dayactirka sanduuqa (Scanpst.exe) si loo hagaajiyo.
Laakiin loogu talagalay most kiisaska, iskaanka ma hagaajin karo qaladka, waxaadna u baahan tahay inaad isticmaasho badeecadeena DataNumen Outlook Repair si loo hagaajiyo faylka PST ee musuqmaasuqa ah loona xalliyo dhibaatada.
Waxa kale oo aad arki kartaa qaladkan marka aad isticmaaleyso Muuqaalka 2002 ama noocyo hoose oo faylka PST-ga uu gaaro ama ka bato 2GB xadka cabirka faylka. Haddii ay arintu sidan tahay, kaliya DataNumen Outlook Repair ayaa ku caawin kara.
Muunad fayl PST musuqmaasuq ah oo sababi doona qaladka. Muuqaalka_2.pst
Faylka waxaa soo ceshaday DataNumen Outlook Repair: Muuqaalka_2_fixed.pst
"Faylka xxxx.pst ma aha feylal fayl shaqsiyeed." qalad